Seychelles Gurukota rinorumbidza mafambiro ekushanya ekuzvipira pakubudirira kushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Gurukota rinorumbidza mafambiro ekushanya ekuzvipira pakubudirira kushanya
Seychelles Gurukota Rezvekushanya musangano wth mafambiro ekufambisa
Mumusangano wakaitirwa kuBotanical House neChishanu, Nyamavhuvhu 27, 2021, nemazita ekufambisa ekukurukura nyaya dzine chekuita nekutengeserana kwavo, Gurukota rinoona nezvekunze uye Tourism, Sylvestre Radegonde akataura kugutsikana kwake kuti, sekune vamwe vashandi, iri boka revashanyi nyanzvi dzakazvipira mukubudirira kweindasitiri.
Iyo ajenda yaisanganisira kunetseka kunoiswa pamberi nemazita ekushanya.
Gurukota Radegonde vakavimbisa vatungamiriri vevashanyi kuti Dhipatimendi Rezvekushanya riri kushanda padyo nemasangano akati kuti kugadzirisa nyaya dzakasiyana dzavari kusangana nadzo.
Izvi zvaisanganisira kugadzira zvigadzirwa kukwezva vashanyi kuti vaongorore masevhisi akasiyana siyana uye zvinokwezva zviripo, chengetedzo, mitero yepakati pezvitsuwa yevashanyi, nezvimwe.
Minister Radegonde vakati, "Chinhu chimwe chinowanzoitika mumisangano yedu nevatinoshanda navo kuzvipira kwavo mukubudirira kwemaindasitiri edu. "Ndiri kufara kuti tese tinoita kunge tiri panzvimbo imwechete kuti toda kuti indasitiri iyi iende kupi."
Pachirongwa chekukurukura pamusangano wakapindwa neMunyori Mukuru wezvekushanyirwa (PS), Sherin Francis, nedzimwe nhengo dzebazi, zvainetsa zvakaburitswa nevatungamiriri vevashanyi uye nekugovana mhinduro dzekugadzirisa matambudziko aripo muchikamu ichi. yakatarisana. Izvi zvaisanganisira kugadzira zvigadzirwa zvekunyengedza vashanyi kuti vaongorore mabasa akasiyana siyana uye zvinokwezva zviripo kwavanenge vachienda, kushomeka kwenzvimbo, kuchengetedzeka, mitero yepakati pezvitsuwa zvevashanyi, mirau uye kunetsekana kwezvakatipoteredza senge kusvibiswa.
Gurukota Radegonde vakavimbisa vatungamiriri vevashanyi nezvekuzvipira pamwe nekuita basa ravo, vachisimbisa kuti Dhipatimendi Rezvekushanya riri kushanda pamwe chete nemasangano akati kuti kugadzirisa matambudziko akasiyanasiyana avakatarisana nawo pamwe nekugadzira mikana yemamwe mabhizimusi ane mari mukati mekambani yekushanya.
“VeDhipatimendi rezveKushanya vari mukutaurirana neHofisi yaMeya weVictoria neChipatimendi cheCulture, pakati pevamwe, kuti vaone kuti guta redu diki nenzvimbo dzinokwezva dzinopa ruzivo rwechokwadi rwecreole kuvashanyi vedu. Zvimwe zvezvinonetsa zvakasimbiswa nevatungamiriri vedu vekushanya zviri kutariswa parizvino nebazi redu kuburikidza nezvikamu zvine chekuita uye nenyaya dzese dzatinotarisana nadzo, hurukuro dzakadai ipai chikuva chekutsvaga mhinduro dzakabatana, ”vakadaro Gurukota Radegonde.
PS Francis wechikamu chake akataura kuti hurukuro iyi yaive panguva yakakodzera nekuti yaibvumidza timu yake kuti ione zvinhu zvinonetsa zvine chekuita nevekushanya kwenzvimbo zvinoenderana nezvakakosha zveDhipatimendi rezveKushanya mukugadzira zvigadzirwa zvitsva zveindasitiri.
“Musangano uyu waburitsa pachena zvinhu zvakawanda zvinoita kuti nzvimbo yacho ive yekutengesa zvakanyanya kuburikidza nezvakataurwa nemapato maviri aya. Padivi redu, isu takazvipira kushanda nemazita edu ekushanya kuti vawedzere kuoneka kwavo kuburikidza neyedu webhusaiti uye nezvimwe zvekushambadzira. "Zvinokurudzira kuti chinangwa chedu chakafanana ndechekusimudzira ruzivo rwevashanyi, nekudaro Dhipatimendi rezveKushanya riri kupa rutsigiro raro kuburikidza nemapurojekiti akasiyana atiri kufambisa kuzadza nzvimbo dziripo muzvigadzirwa zvedu," vakadaro Mai Francis.
Secheres inoverenga 89 yakachengeteka-yakasimbiswa yakazvimirira mafambiro ekufambisa anoshanda akatenderedza Mahé, Praslin neLa Digue.